ဒီလို အချိန်ကြီး မှာ CLUB ဘဲ သွား သွား BAR ဘဲသွားနေကြတဲ့ သူတွေကို လုပ်သင့်လု ပ်ထိုက်တဲ့ အရာ ကို ပြောပြလာတဲ့ မိတ်ကပ် မေဦး…. – GaMone Media
Homepage / Celebrity / ဒီလို အချိန်ကြီး မှာ CLUB ဘဲ သွား သွား BAR ဘဲသွားနေကြတဲ့ သူတွေကို လုပ်သင့်လု ပ်ထိုက်တဲ့ အရာ ကို ပြောပြလာတဲ့ မိတ်ကပ် မေဦး….
ဒီလို အချိန်ကြီး မှာ CLUB ဘဲ သွား သွား BAR ဘဲသွားနေကြတဲ့ သူတွေကို လုပ်သင့်လု ပ်ထိုက်တဲ့ အရာ ကို ပြောပြလာတဲ့ မိတ်ကပ် မေဦး….
By Ga MonePosted on June 9, 2021 June 9, 2021
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စစ်အာဏာရှင် တော်လှန်ရေး အရေး တော်ပုံ ကြီးဟာ ဆိုရင် ရက်ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော် ကြာမြင့် နေပြီလည်း ဖြစ်သလို သေဆုံး သူတွေ နဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံ ထားရသူ တွေလည်း အများအပြား ရှိနေတာ ပါ။ အခုလိုမျိုး ပြည် သူတွေ က အသက်တွေ ရင်းပြီး တော်လှန်နေ ကြပေမယ့် အချို့ လူငယ်တွေကတော့ Bar သွား Club သွားကြရင်း အချိန်ကုန်နေ ကြတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့ကြီး မှာ ဆိုရင်လည်း Martial law ချိန်ကျော် တဲ့ အချိန်တွေ ထိ club တွေမှာ လူစည်ကား နေပြီး သောက်စား မူးယစ်နေကြတဲ့ သူတွေ အပြင် လူမှု့ ကွန်ယက် စာမျက်နှာတွေ မှာ လည်း အလှပုံတွေ တင်ကြကာ မင်္ဂလာဆောင် အလှူ အတန်းတွေ နဲ့ လည်း စည်ကားနေတာ တွေ့ရပါတယ်။
မိတ်ကပ် ပညာရှင် အဖြစ် အောင်မြင်မှု့ များစွာ ရရှိ ထားတဲ့ မေဦး ကတော့ ဖေဖော်ဝါရီလ တစ်ရက်နေ့ကတည်းက စတင် ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲကြီးမှာ အင်တိုက် အားတိုက် ပါဝင်ခဲ့တာ မို့ ၅၀၅ က ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူခြင်း ခံထား ရသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရေးတော်ပုံ အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ခိုင်မာ ပြတ်သားတဲ့ ယုံကြည်မှု တွေကြောင့် မေဦးက Gen Z လူငယ်လေးတွေ နဲ့ အတူ လွတ်မြောက် နယ်မြေမှာ စစ်သင်တန်း တက်ရောက်နေ တာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်နော်။ ပြည်သူ ချစ်အနုပညာရှင် အဖြစ် ကနေ ပြည်သူကို အကာအကွယ် ပေးတဲ့ အနုပညာရှင် အနေ နဲ့ ရဲရဲ ဝင့်ဝင့် ရပ်တည် လာတဲ့ မေဦး ရဲ့ စိတ်ဓာတ် နဲ့ ခံ ယူချက် ကတော့ တကယ်ကို လေးစားဖို့ ကောင်းပါတယ်။
အခုလို အရေးတော်ပုံ ကြီးအောင်မြင်ဖို့ အတွက် ကြိုးစား နေကြချိန် မှာ Barသွား Club သွားရင်း အချိန်ကုန် နေကြတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ အတွက် မေဦး ကသူ့ရဲ့Facebook စာမျက်နှာမှာ “club ပဲသွားသွား Bar ပဲသွားသွား အလှ ပုံပဲ တင်တင် မင်္ဂလာပဲ ဆောင်ဆောင် တော်လှန်ရေး မပြီးသေးဘူး လို့ သတ်မှတ် ထားပြီး တက်နိုင် တဲ့ နေရာ ကတက်နိုင်သလောက် ဝိုင်းဝန်း ကူညီပေး“နိုင် ကိုနိုင်ပြီ “……” ဆိုပြီး ခွန်အား ဖြစ်စရာ စာလေးရေးသားကာ သွေးမအေးသွားဖို့ တိုက်တွန်း ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေ အတွက် ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေးလိုက် ပါတယ်နော်….။
credit: May Oo’s Facebook acc
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စစ္အာဏာရွင္ ေတာ္လွန္ေရး အေရး ေတာ္ပုံ ႀကီးဟာ ဆိုရင္ ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ ေနၿပီလည္း ျဖစ္သလို ေသဆုံး သူေတြ နဲ႔ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံ ထားရသူ ေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနတာ ပါ။ အခုလိုမ်ိဳး ျပည္ သူေတြ က အသက္ေတြ ရင္းၿပီး ေတာ္လွန္ေန ၾကေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ လူငယ္ေတြကေတာ့ Bar သြား Club သြားၾကရင္း အခ်ိန္ကုန္ေန ၾကတာလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီး မွာ ဆိုရင္လည္း Martial law ခ်ိန္ေက်ာ္ တဲ့ အခ်ိန္ေတြ ထိ club ေတြမွာ လူစည္ကား ေနၿပီး ေသာက္စား မူးယစ္ေနၾကတဲ့ သူေတြ အျပင္ လူမႈ႕ ကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေတြ မွာ လည္း အလွပုံေတြ တင္ၾကကာ မဂၤလာေဆာင္ အလႉ အတန္းေတြ နဲ႔ လည္း စည္ကားေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။
မိတ္ကပ္ ပညာရွင္ အျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈ႕ မ်ားစြာ ရရွိ ထားတဲ့ ေမဦး ကေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ တစ္ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္ ခဲ့တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး တိုက္ပြဲႀကီးမွာ အင္တိုက္ အားတိုက္ ပါဝင္ခဲ့တာ မို႔ ၅၀၅ က ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူျခင္း ခံထား ရသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးေတာ္ပုံ ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ ခိုင္မာ ျပတ္သားတဲ့ ယုံၾကည္မႈ ေတြေၾကာင့္ ေမဦးက Gen Z လူငယ္ေလးေတြ နဲ႔ အတူ လြတ္ေျမာက္ နယ္ေျမမွာ စစ္သင္တန္း တက္ေရာက္ေန တာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္ေနာ္။ ျပည္သူ ခ်စ္အႏုပညာရွင္ အျဖစ္ ကေန ျပည္သူကို အကာအကြယ္ ေပးတဲ့ အႏုပညာရွင္ အေန နဲ႔ ရဲရဲ ဝင့္ဝင့္ ရပ္တည္ လာတဲ့ ေမဦး ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ နဲ႔ ခံ ယူခ်က္ ကေတာ့ တကယ္ကို ေလးစားဖို႔ ေကာင္းပါတယ္။
အခုလို အေရးေတာ္ပုံ ႀကီးေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ ႀကိဳးစား ေနၾကခ်ိန္ မွာ Barသြား Club သြားရင္း အခ်ိန္ကုန္ ေနၾကတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစဖို႔ အတြက္ ေမဦး ကသူ႔ရဲ႕Facebook စာမ်က္ႏွာမွာ “club ပဲသြားသြား Bar ပဲသြားသြား အလွ ပုံပဲ တင္တင္ မဂၤလာပဲ ေဆာင္ေဆာင္ ေတာ္လွန္ေရး မၿပီးေသးဘူး လို႔ သတ္မွတ္ ထားၿပီး တက္ႏိုင္ တဲ့ ေနရာ ကတက္ႏိုင္သေလာက္ ဝိုင္းဝန္း ကူညီေပး“ႏိုင္ ကိုႏိုင္ၿပီ “……” ဆိုၿပီး ခြန္အား ျဖစ္စရာ စာေလးေရးသားကာ ေသြးမေအးသြားဖို႔ တိုက္တြန္း ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြ အတြက္ ျပန္လည္ ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္….။
ရေချိုးခန်း ထဲက ရေချိုး နေတဲ့ အကြမ်းစား ပုံတွေချ ပြလိုက်တဲ့ “နန်းအမရာ”
မွေးနေ့ အလှူလေး အဖြစ် လူအယောက်(၁၀၀) စာ အတွက် အာဟာရ ဒါန အလှူလေးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦး
ကြည့်မိ သူတိုင်း ပါးစပ် အဟောင်းစားဖြစ်သွားစေမယ့် ဗီဒီယိုလေး တစ်ခုကို ချပြလာတဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
Previous post အခု ကာလ မှာ အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် မိတ်ဆွေများ နဲ့ စုပေါင်း အလှူလေးကို ပြုလိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
Next post သူမရဲ့ အဝတ်အစား လေးတွေကို အမှန်တကယ် လိုအပ်တဲ့ နေရာမှာလှူဖို့အတွက် ကိုယ်တိုင် ပြင်ဆင်နေတဲ့ ဘေဘီမောင်
ရင်ခုန်စရာ ကောက်ကြောင်းအလှတွေ နဲ့ တင်သားလေးကို လှုပ်ခါပြီး အမိုက်စား ကပြ ထားတဲ့ စုလှိုင်ဝင်း ရဲ့ ဗီဒီယို
အသက်(၁၇)နှစ် နဲ့ TIK TOK မှာ လူကြိုက် များလာခဲ့ပြီးနောက် သန်းကြွယ် သူဋ္ဌေးမလေး ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ ကောင်မလေး